Abavelisi beeNkampani zeNkampani kunye nabaXhasi - China Iindaba zeFektri yeeNkampani
Izizathu zokusebenzisa iAluminiyam 6061 & 7075-T6 kwiiMveliso zeMveliso zeCNC
I-7075-T6 ingumxube wealuminium. Ukuba ubamba umsebenzi wethu kwi-chromatogram engama-4130, uya kwazi ukuba ingxubevange sisinyithi esinomxube wezinto ezimbini okanye nangaphezulu. I-7075 aluminium ngumxube wezinto ezi-4 ezahlukeneyo: i-aluminium, i-5.6% ukuya kwi-6.1% ye-zinc, i-2.1% ukuya kwi-2.5% ye-magnesium kunye ne-1.2% t ...
Ukulungiswa kwakhona kweAnebon kunye nokuThengwa koomatshini abatsha
ngomphathi ku 20-10-06
Ekuqaleni kuka-2020, u-Anebon waluva ngokwenene uxinzelelo lokuhanjiswa. Nangona isikali sefektri asisencinci, kodwa oku akufane kwenzeke ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Ukuthathela ingqalelo ukubonelela abathengi ...
Ndwendwela uMthengi wethu eJamani
ngomphathi ku 20-10-05
Sisebenze nabathengi bethu phantse iminyaka emi-2. Umthengi wathi iimveliso zethu kunye neenkonzo zilungile kakhulu, ke ngoko sammema ukuba siye kwikhaya lakhe (eMunich), kwaye wasazisa ngemikhwa namasiko amaninzi asekuhlaleni. Ngolu hambo, sinokuqiniseka ngakumbi ngokubaluleka kwenkonzo kunye ...
I-Anebon Hardware Co, Ltd. ifumene i-ISO9001: 2015 "isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo loMgangatho"
ngomphathi ku 20-10-04
Ngomhla kaNovemba 21, 2019, u-Anebon uphumelele uviwo olungqongqo kunye nokuvunywa kwesicelo, izinto ezingenisiweyo, uphononongo, isatifikethi, kunye nokwazisa kunye nokugcwalisa, kwaye zonke izinto zophicotho-zincwadi zahlangabezana nemigangatho ebekiweyo kwi-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015 kunye nokuhambelana kwakhona ...
Iimpawu ze-Anebon Electrical Discharge Machining
Ngokweemfuno ezahlukeneyo zokuzoba. I-Anebon ineemveliso zabathengi ezininzi ezifuna i-EDM. Iimpawu ze-Anebon Electrical Discharge Machining: 1) Nayiphi na into enokuqhutywa ingaqhutywa. Ukususwa kwezinto kwi-EDM kufezekiswa sisiphumo sokufudumeza ngombane ngexesha lokukhupha, ...
Izinto zokuvavanya yi-CMM
ngomphathi ku 20-08-20
Umgaqo wokulinganisa we-CMM kukulinganisa ngokuchanekileyo amaxabiso amathathu okulungelelanisa umphezulu wenxalenye, kunye nokulinganisa izinto zomlinganiso ezinje ngemigca, umphezulu, iisilinda, iibhola ngealgorithm ethile, kwaye ufumane ubume, indawo kunye nezinye ijiyometri idatha ngezibalo ...
Inkqubo yoVavanyo lweMveliso yoLwazi kunye noLwazi
Inkampani iququzelela abasebenzi abavela kwisebe lezentengiso ukuba baye kumasifundisane ukuze bafunde ulwazi olufanelekileyo. Kwimpelaveki ephelileyo (nge-9 ka-Agasti 2020), saya kwindibano yocweyo ukuze sifunde iinkqubo zokuhlola kunye nothotho lwezixhobo ezisisiseko zokusebenza. Inkosi yovavanyo depa ...
Igalelo lika-Anebon kumlo wokulwa ne-COVID-19
Ukuze uphendule kwiimfuno zesizwe, kwaye unciphise iimfuno ezingxamisekileyo zabavelisi boomatshini basekhaya ngaxeshanye. U-Anebon usebenzisa zonke izibonelelo ezikhoyo ukuvelisa kunye nokuhlanganisa isikere se-hydraulic kumatshini wemaski ngelixa uqinisekisa ukuhanjiswa kwabanye abathengi. Inqaku lokugqibela ...
Ufanele Uthethe Nini Kubenzi Ngezixhobo?
ngomphathi ku 20-06-30
Emva kokuqinisekisa iingcinga zakho, lixesha lokuba uqale ukhangele abavelisi abanokubakho ukuqala incoko malunga nokuvelisa. Emva kwayo yonke loo nto, ukufumana umenzi kubonakala kunzima. Apha, kuya kufuneka ugqithisele ngokufanelekileyo ulawulo lwemveliso kwabanye, ke kubaluleke kakhulu ukufumana iman ...
Phumelela iTrasti yaBathengi ngeyona ndlela inyanisekileyo
UAllen ngumthengi ovela eJamani. Inkampani yakhe ngumenzi wezixhobo zonyango. Ufumene uAnebon xa wayefuna umthengisi kuGoogle. Emva konxibelelwano, ndafumanisa ukuba ukhathazeke kakhulu malunga nolawulo lomgangatho wababoneleli. Njengoko sonke sisazi, utyalo-mali o ...
I-Anebon Fire Drill
Ukuqinisekisa ukhuseleko kwimveliso yenkampani, ukomeleza ukuqonda kwabasebenzi ngokhuseleko lomlilo, ukuthintela kunye nokunciphisa ukwenzeka kweengozi zomlilo, kunye nokuphucula amandla abasebenzi okuzihlangula kunye nokuphendula kwimeko zonxunguphalo. U-Anebon wenza ulwazi ngomlilo ...
Isimo sika-Anebon ngokubuyela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi
ngomphathi ku 20-05-20
Ngemizamo yamazwe onke, onke amashishini alungiselela ukuqhubeka nomsebenzi. U-Anebon uzimisele ukuphuhlisa iimveliso ezintsha kunye nabathengi. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukunceda abathengi. Iiprojekthi zethu ezintsha: